Google Drive : IT-KOKO
Pic & Me
IT is not just about 101001011
You are here: Home / 2012 / April / 25 / Google Drive
Google Drive	Published by IT-KOKO on April 25, 2012 |2Responses ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံပြန်နေလို့ ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာတောင် ကြာနေပါပြီ။ ဒီနှစ်ထဲ့မှာ ကျွန်တော် ပထမဆုံးပြန်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် ကျွန်တော့ ကျောင်းစာ၊ အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကို Dropbox မှာထားပါတယ်။ Photo Share ချင်တာတွေကို Munis မှာထားပါတယ်။Apps တွေနဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့ Box မှာထားတယ်။ အခုတစ်ခါတော့ နောက်ထက် တစ်နေရာထားဖို့ ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ Google Drive ပါ။ ကြားနေတာကတော့ ကြာနေပါပြီး။ အခုမှဘဲ တရားဝင်ထွက်တော့မှာဖြစ်လို့ တင်လိုက်တာ။ Google ကတော့ နေရာအားလုံးကို လိုက်သိမ်းနေပါပြီ။ ပါလေရာ ဖြစ်နေပါပြီ။ Microsoft မှာ SkyDrive ရှိတယ်။ Apple မှာ iCloud ရှိတယ်။ အခု Google မှာလဲ Google Drive ရှိလာပါပြီ။
ဘာတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ ပုံမှန် Cloud Storage တွေမှာပါတဲ့ ဖိုင်တွေ သိမ်းမယ်၊ မျှဝေမယ်၊ နေရာတိုင်းကနေ အင်တာနက် ရှိတာနဲ့ သုံးလို့ရမယ်။ ဘယ်စက်ကမဆို ကြည့်လို့ရမယ်၊ သုံးလို့ရမယ် စတာတွေ အကုန်ပါပါတယ်။ ကောင်းတာတစ်ခုက Dropbox လိုမျိုး Desktop ကနေ လုပ်နိုင်မယ်ထတယ်။ ကောင်းကောင်းမစမ်းရသေးဘူး။ စမ်းလို့လဲမရသေးတော့ သေသေချာချာ မပြောနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့။ သတင်းပေးတဲ့ပုံမျိုးလေးဘဲ သဘောထားပြီး ဖတ်ပေးပါလို့။
လောလောဆယ်တော့ အလကားက 5GB ရနိုင်ပါတယ်။ ထက်တင်ချင်ရင်တော့ တစ်လကို $2.50 နဲ့ 25GB ထိ ထက်တိုးလို့ရပါတယ်။ Cloud Computing တွေဖြစ်လို့ collaborate ဖြစ်တယ်။ Version Control တွေကောင်းလာတယ်။ အီးမေးကနေ ဖိုင်ကြီးကြီးတွေ ပို့လို့ကောင်းသွားတယ်။ Google Drive ကလင့်ကို Gmail ကနေပေးလိုက်တာနဲ့ ရောက်သွားရော။ Google+ မှာ Instant Upload ကိုသတိထားမိမှာပေါ့။ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို သူများတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Share လို့ရပြီပေါ့။
Adobe Illustrator and Photoshop ဖိုင်တွေကိုလဲ ဘားမှသွင်းထားစရာ မလိုဘဲနဲ့ Browser ကနေကြည့်လို့ရပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ဖိုင်အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀ကျော်ကိုလည်း Browser ကနေကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့။ Google Doc သူငယ်ချင်းတွေ ဆွေးနွေးချင်တာတွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ collaborative ပိုဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။ အများကြီးကောင်းတာတွေပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ အောက်ကလင့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Credit : https://drive.google.com
Facebook Comment ပေးလို့ရပါတယ်။ comments	Posted in နည်းပညာဆိုင်ရာ | Tagged Google Drive	http://blog.calmhill.info CalmHill
သတင်းပေးလိုက်ဦးမယ် SkyDrive မှာ Free Upgrade ပေးနေတယ်နော် ယူပြီးပြီလား Limited Time ဆိုတော့ သွားယူထားလိုက်ဦးဗျ 25 GB ရလိမ့်မယ်။ https://skydrive.live.com/ManageStorage ကိုသွားကြည့်လိုက် အဲဒီ့မှာ 8 GB ကနေ 25GB ကို Free Upgrade လုပ်ပေးနေတယ် Limited Time လို့တော့ပြောတယ် မနေ့ညကတော့ ရပါသေးတယ်။
ကျွန်တော် တိုးပြီးသွားပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးလေး။
← Previous	Next →	Copyright © 2013 IT-KOKO.
Powered by WordPress and Adroa.	Home